Any Korea Atsimo dia heverina ho firenena feno mponina sy be mponina, noho izany, ny faritra fitehirizana ambaratonga eo amin'ny taniny dia manana faran'ny 3.82 metatra. km, ary ny ranomasina - 2.64 metatra toradroa. km. Anisan'ireny faritany ireny ny valan-javaboary sy tahiry samihafa, izay ankafizin'ny mponina sy mpizaha tany.
Saika ny zaridaina voajanahary rehetra tany Korea Atsimo dia naorina tamin'ny taonjato faha-20 tamin'ny taonjato faha XX. Ao amin'ny firenena dia misy tahiry 20 lehibe sy kely (50 eo ho eo), izay antsoina hoe distrika na faritany. Maro amin'izy ireo no mipetraka eny an-tendrombohitra sy any amoron-tsiraka. Ity farany dia ahitana nosy malaza sy toerana iray misy rano.
Ao amin'ny faritry ny valan-tseranana maro ao Korea, ankoatra ny mahasarika voajanahary, dia afaka mahita tsangambato ara-kolotsaina sy tempoly bodista ianao. Ny faritra fiarovana ny natioran'ny firenena dia miankina amin'ny orinasa State for Management of Reserves, izay an'ny Minisitry ny Fiarovana ny tontolo iainana.
Ny fidirana amin'ny valanjavam-pirenena any Korea dia mahazatra, fa ny vidiny dia ambany. Tsy maintsy mandoa hofan-trano ianao. Ny vola miditra rehetra dia mandeha amin'ny fampandrosoana ny faritra fiarovana ny natiora. Tsy maintsy manaraka fitsipika maromaro ny mpizahatany mandritra ny fitsidihana ny tahiry. Eto dia voarara izany:
hidina avy eny an-dalana;
manohintohina ny biby.
Ireo zaridala malaza indrindra any Korea Atsimo
Ny faritra sasany momba ny tontolo iainana ao amin'ny firenena dia mitsidika olona 2-3 tapitrisa isan-taona. Ny ankamaroan'izy ireo dia:
Odaesan - dia misy ampahany roa: ny monastera fahiny tao Woljeongs sy ny ony Sogymgang, izay voahodidin'ny vato, vato ary lohasaha. Amin'ny lohataona dia tonga ireo mpizahatany mba hivezivezy, ary amin'ny ririnina - amin'ny skiing na ny snowboarding. Ao amin'ny faritry ny valan-javaboary dia misy tampony 5, natao ho an'ny fanatanjahantena. Eto dia misy harena nasionaly ao ambanin'ny No. 48 (9-tiera pagoda) ary ny 139 (vato ny Bouddha).
Seoraksan (Seoraksan) - zaridaina nasionaly lehibe indrindra ao Korea Atsimo, ny sariny dia mamoraka karatra sy milina maro an-tsarimihetsika. Any amin'ny faritra 398 metatra. km dia trano fandraisam-bahiny, toeram-ponenana ho an'ny kamboty, trano fisakafoanana ary fanatanjahan-tena Ity no tranainy indrindra amin'ny Tempolin'i Asia Buddhist Sinhyntsa, 19-metatra ny sary sokitra Gautama, natsipy tamin'ny varahina vita amin'ny varahina, ary koa manana làlana maherin'ny 10 hikoriana. Manana fahasamihafana sy faharetana hafa izy ireo.
Bukhansan - miorina eo amin'ilay havoana tsy hita maso ao amin'ny faritanin'i Gyeonggi. Ny flora sy ny fauna dia manondro karazan-javamaniry, holatra ary biby. Ny faritr'io tahiry io dia ao an-drenivohitra, noho izany dia malaza amin'ny mponin'i Seoul izany . Ny valan-javaboarim-pirenena dia tafiditra ao amin'ny Guinness Book of Records ho an'ny be mpitsidika indrindra.
Ny Kayasan (Gaya-san) - dia manodidina ny tendrombohitra, izay malaza amin'ny monastera ao Heins . Ao amin'ny monastera dia mitahiry tahirin-tsoratra tranainy fahiny, natao tamin'ny taonjato faha XIII. Ny governemantan'ny firenena dia naniry ny hamindra azy ireo ho any amin'ny toeram-pikomiana manokana ho an'ny toerana iray miaraka amin'ny hafanana sy ny hafanana sasany. Nifindra avy hatrany ny antoko voalohany, dia nanomboka niharatsy hatrany izany, ka dia napetraka tamin'ny endriny voalohany ny fanangonana. Tsy afaka mamaha io trangan-javatra io hatramin'izao ny mpahay siansa.
Hallasan dia toeram-ponenana ao amin'ny Nosy Jeju ary izy dia UNESCO World Heritage Site. Ao amin'ny faritry ny valan-javaboary dia misy ala honko, ala, ala sy volkano, ny tampon'izany dia 2950 m (toerana avo indrindra ao Korea Atsimo). Ny farihy dia misy farihy manga sy manga. Tsara raha tonga eto ny volana Mey ka hatramin'ny Jona, rehefa mamelana ny azalea.
Inona ireo valan-tserasera hafa hitsidihana an'i Korea Atsimo?
Mandritra ny dia iray manerana ny firenena, mitandrema amin'ny tahiry miavaka toy izao:
Park Tadochehasan - anisan'ny faritanin'i Cholla-Namdo. Ny faritr'ilay valan-javaboary dia rakotra ala matevina, mipetraka amin'ny karazana bibikely 885, 165 - trondro, 147 - vorona, 13 - amphibiana ary karazana biby mampinono 11.
Grand Park - antsoina koa hoe Park Great Seoul ao amin'ny Repoblikan'i Korea izy io. Ao amin'ny faritaniny dia misy rosary, zoo, tranom-bakoka nasionalin'ny maoderina , fanatanjahan-tena sy karazam-pandehanana.
Park Halle - ity valan-javaboary ity dia antsoina hoe làlan'ny rano ao Hallesudo. Izy io dia milina 150 kilometatra lavitr'andro avy any Yesu ka hatrany Kojido. Misy isa maromaro tsy misy mponina any amin'ny lava-bolo sy virjina any.
Ny Park Park (Jeju Loveland) dia ao amin'ny Nosy Jeju any Korea Atsimo. Io dia orinasa tsy manam-paharoa ao amin'ny faritanin'io fananganana saribakoly ireo olona mitokona, voasokajy ao amin'ny toerana maro samihafa. Ny varavarana, ny banky ary ny loharano dia voaravaka endrika taova sy taolam-paty. Misy ihany koa ny tranombakoka firaisana ara-nofo, fivarotana iray miaraka amin'ny entana an-tsoratra ary ny sinema. Ny fidirana amin'ny valan-javaboary dia avela ho an'ny olona maherin'ny 18 taona.
Voraxan - malaza amin'ny toerana malaza izy. Eto ny renirano dia nosoloan'ny rivo-doza mahery, ary ny alam-baravarankely dia voahodidin'ny vato. Ao amin'ny faritry ny faritra fiarovana voajanahary dia misy ny tempolin'i Tokchus fahiny.
Park Buhasan - dia miorina ao Seoul ary voahodidin'ny ala malaza. Ao amin'ny faritry ny faritra voaaro dia misy monastera sy tempoly , ary koa lalana fizahantany manokana.
Ny Park Sculpture - dia miorina eo amoron'ny Ranomasina Mavo any Korea Atsimo. Ny sarivongana dia natao amin'ny endriky ny maherifo izay mihaona sy latsa-pitiavana, ary avy eo dia miala ary mahatsapa fanaintainana. Izy rehetra dia manana endrika maotina ary manondro. Ny tsangambato sasantsasany dia erotic amin'ny natiora. Ny sary sokitra malaza indrindra any amin'ny valan-java dia antsoina hoe "Tranoben-tanana".
Ny Islan Park - ny faritry ny faritra rehetra dia nambolena voninkazo mamy sy zavamaniry hafakely. Ireto misy toeram-piompiana kely sy zoo, loharano mozika ary pagoda, tetezana sy bisikileta. Amin'ny andro manjombona eny ambonin'ny vatolampy dia matetika ianao mahita sokatra mihoa-pampana.
Park Seongsan dia volkano maty volo izay manintona ny hatsaran-tarehiny amin'ny filentehan'ny masoandro na ny fiposahan'ny masoandro. Ny fiakarana amin'ny volon'ny volokano dia tanterahana amin'ny tohatra manokana, izay ahitana sehatra sy banky fanaraha-maso.
Ny Park Namsan - ny tanjon'ny mpizaha tany dia ny tilikambo TV, izay manome fomba fijery mahatalanjona. Azonao atao ny mitraka izany amin'ny fampiasana ny fako. Ao amin'ny tahiry, ireo mpizaha tany dia hahita zavamaniry isan-karazany, tanàna kely iray ary dobo iray tsara tarehy miaraka amin'ny riandrano.
Kapetaka ho an'ny kafe
Salady misy lela sy mamy
Pumpkin soup - 7 mahasalama sakafo mahasalama
15 mistery mahatalanjona indrindra teo amin'ny tantara
Wedding Dresses ho an'ny feno 2014
Salope salady miaraka amin'ny tongolo lay - fanolokolo voalohan'ny sakafo vitaminina tsotra ho an'ny tsirony rehetra!
Teknolojian'ny fanabeazana an-tsitrapo
Inona no tokony hatao mba handresena ny legioma?
Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny stylist?